Isililo bephelelwa yitoho abalingisi beSibaya
SIKHULU isililo sokuphelelwa yitoho kubalingisi beSibaya njengoba begcina ukusebenza kusasa namhlanje.
Engxoxweni ababenayo neSolezwe ngeSonto uLondeka Mchunu odlala indawo kaLondiwe Ngubane, no-Asavela Mgqithi onguNtwentle, bathe izinhlizyo zabo zibuhlungu kakhulu njengoba kuphela umsebenzi. Lezi zintokazi zisho ngazwi linye ukuthi izindaba zokuphela kweSibaya zibe zimbi kakhulu ngoba kusho ukunqamuka komholo.
“Ngizocela ukukhulumela thina sonke kwiSibaya. Kuyinto eyaziwayo ukuthi ukuphelelwa wumsebenzi yinto ebuhlungu kangakanani kodwa sethembe uNkulunkulu ukuthi uzosipha omunye umsebenzi. Siphatheke kabi ngoba ngeke sisakwazi ukukhokhela izikweletu sondle nemindeni yethu.
“Isibaya bese sifana nekhaya lami nozakwethu bese befana nezingane zakithi ngoba besihlala sibonana zonke izinsuku,“ kukhala u-Asavela ojoyine lo mdlalo ngo-2018.
Unqabile ukusho ukuthi kukhona yini lapho abalandeli beSibaya bangase bambone khona futhi edlala, wathi okwamanje ngeke aphendule mbuzo ngekusasa lakhe ekulingiseni. Ubonge bonke abedlala nabo kwiSibaya wathi ubonga nethuba alinikeziwe ngabadidiyeli bomdlalo.
ULondeka Mchunu yena seyimshaya okwesibili le nduku njengoba eqale kwiSethembiso naso savalwa ngaphambi kokujoyina Isibaya. Ubenezinyanga ezimbalwa njengoba ejoyine ngoSepthemba. Le ntokazi yaseMachunwini eMsinga, ithe zikhona izindawo eseyenze kuzo inhlolokhono kodwa ngeke izidalule okwamanje.
Uthe yize noma kubuhlungu ukuphela kweSibaya kodwa akumethusanga ngoba vele ujoyine esazi ukuthi sizophela. Uthe noma kade kuyisikhathi esincane kangakanani ubengeke aliyeke ithuba lokuvela emdlalweni omkhulu njengeSibaya.
Kulindeleke ukuba bagcine kusasa noma ngoLwesibili ukuqopha bese kudlalwa iziqephu zize ziphele. Lo mdlalo obubalwa kwethandwa kakhulu ngababukeli waqala, ngo-2013 kuMzansi Magic.
Kubikwa ukuthi kuhambe, kwahamba wehlelwa yizibalo zababukeli okwenze aboMzansi Magic banquma ukuwuqeda. Kubikwa ukuthi isikhala sawo sizovalwa ngomusha iDiepsloot, nawo ozongena ligamenxe ihora lesishiyagalombili ebusuku. Lo mdlalo ophekwa yiBlack Brains Productions sewuvele sewuhlabene ngenkakha yomlingisi uThandeka Dawn King odlala indawo kaMaNgcobo kuZalo.